Dropbox inogumira mahara kuwana kune yayo sevhisi kune asingasviki matatu madhizaini | Linux Vakapindwa muropa
Dropbox ndeye muchinjiko-chikuva gore-based yekutambira sevhisi Iyo inokwira kumusoro uye ine mukurumbira pakati penyika dzinonyanya kushandiswa gore rekuchengetedza masevhisi.
Basa racho inogonesa vashandisi kuchengeta uye kuyananisa mafaera online uye pakati pemakomputa uye kugovana mafaera nemafolda nevamwe vashandisi uye nemahwendefa uye mobiles.Kune emahara uye akabhadharwa vhezheni, imwe neimwe ine dzakasiyana siyana sarudzo.
Iyo nharembozha inowanikwa yeApple, Windows Runhare, Blackberry uye iOS (Apple).
Izvozvo zvakati, Dropbox ichangobva kutsanangura miganho pakushandiswa kwayo sevhisi, sarudzo inoshamisa vanhu vazhinji munharaunda.
1 Dropbox inoisa miganho pane vashandisi vemahara
2 Kumanikidza munhu wese kuve vashandisi veprimiyamu?
2.1 Dzimwe nzira dzeLinux
Dropbox inoisa miganho pane vashandisi vemahara
Dropbox yakafunga kudzikamisa huwandu hwemidziyo yaunogona kubatanidza ipapo ipapo kune yako Dropbox account 3 chete kana iwe uchinge uine rusununguko rwekuwana sevhisi.
"Basic vashandisi vanogumira kumidziyo mitatu kubva munaKurume 2019."
Kana ivo chete vane yemahara yekuwana iyo yeDropbox mupi, izvozvi ivo vanozokwanisa kuona yavo backups chete pane yakaganhurirwa nhamba yezvigadzirwa.
Iyo kambani yaita ayo emahara zvinopihwa zviripo pazvinhu zvitatu chete. Izvi ndizvo zvakaziviswa nekambani pane yayo yepamutemo webhusaiti kutanga kwemwedzi uno.
Sezvo gore rekuchengetera zvipiriso zvinowedzera kukwikwidza, zvinogona kuve zvakaoma kune vanochengeta gore kuti vawane iko kurongeka pakati pekupa yakaderera-mutengo mutengo uye zvinopihwa zvemahara.
Yepamberi uye yevanoshandisa vashandisi vanogona kubatanidza isina muganho nhamba yemidziyo Vashandisi vebhizinesi vanogona kusanganisa zvishandiso zvisina muganho, asi Advanced Dropbox uye Enterprise manejimendi anogona kudzikamisa huwandu hwezvigadzirwa izvo zvikwata zvavo zvavanogona kubatanidza
Kana iwe uri mushandisi wekutanga uye iwe wakabatanidza anopfuura matatu maturusi pamberi paKurume 2019, ako ese akambobatanidzwa marongedzero acharamba akadaro, asi iwe haugone kubatanidza mamwe majaira.
Zvinoreva kuti hapana nzira yekuwedzera imwe kunze kwekunge waidzima kusvika pamuganhu wa 2. Unobvisa imwe wobva wawedzera imwe.
Heano maitiro ainoenda izvozvi kune mahara vanyori.
Kumanikidza munhu wese kuve vashandisi veprimiyamu?
Nemamiriro ezvinhu aya akaziviswa neDropbox inogona kumanikidza vamwe vashandisi kusiya mubatsiri uye tendeukira kune vakwikwidzi, vamwe vanoyambira.
Pane zvimwe zvakafanana uye zvakanaka kwazvo sarudzo seGoogle neGoogle Drive yayo yekupa, Microsoft ine OneDrive sevhisi, uye zvimwe zvakawanda.
Ivo vanotsanangura kuti vakwikwidzi vakananga veDropbox Ivo zvakare vanopa emahara zvinopihwa uye mazhinji acho haana muganho wakadai mukushandiswa kwemasevhisi avo.
Kubva pane zvinotsanangurwa nevazhinji nezve zano iro richangotorwa naDropbox, yekupedzisira ichave iri panguva yakaoma.
Vashandisi vemahara vangangorema zvakanyanya pamhedzisiro yako. Ichi chinhu chinogona kuitika, vanodaro, kana usiri Google uyo anogona kupa 15 GB yekushandisa mahara kune vashandisi vayo.
Naizvozvo, zvinonzwisisika kuda kumanikidza vashandisi kuchinjira kune yakabhadharwa account. Nehurombo kune Dropbox, kune akawanda mamwe emahara sarudzo anogona kuchinja.
Maererano nevamwe, ichocho chokwadi chekurasikirwa nevashandisi, kunyangwe vakasununguka kana kwete, chimwe chinhu icho kambani yakadaro inofanirwa kudzivirira.
Dropbox pasina mubvunzo yaita akateedzana masarudzo akanganisa vashandisi veLinux. Iyi sarudzo yakatiyeuchidza Nyamavhuvhu 2018, apo kambani yakazivisa kuti mune ramangwana raizobvisa mafaera ese paLinux kunze kwe ext4 isina kunyorera.
Kune vakawanda kwazvo vanotenda kuti kambani inotambura nekushaikwa kwemari yekutsigira zvipo zvayo zvakasiyana.. Kune vazhinji vavo, Dropbox inogona kuwanikwa neyegore yekuchengetedza hofori mumakore mashoma anotevera.
Dzimwe nzira dzeLinux
Kunyange kune vakasiyana vanopa gore rekuchengetedza masevhisi, havazi vese vane vatengi vepamutemo veLinux. Kuti pane mashoma anogona kutsiva Dropbox.
Unogona kutarisa iyo inotevera posvo kudzidza nezvezvimwe zveizvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Dropbox inoganhurira kuwana yemahara kune yayo sevhisi kune asingasviki matatu madhizaini